Kedu ihe ị ga-eme na Sagunto? Nature, ncheta na gastronomy | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Spain obodo, Nduzi
Ọ bụrụ n’ị na-eche ihe ị ga-eme na Sagunto N'ihi na ị na-eme atụmatụ ịga obodo Valencian, anyị ga-agwa gị na ị ga-enwe mmasị na ọnụnọ gị nke ukwuu. N'ihi na isi obodo nke mpaghara Murvedro Field, nke dị n'ebe ugwu nke ógbè ahụ, na-enye gị ma ihe ebube na ihe ncheta.
Tọrọ ntọala site na edetanos na aha nke Nkpu, wee bụrụ Saguntum Roman na guzogide nnọchibido nke ndị Carthaginians na-edu Hannibal na ihe omume dị ka ama dị ka saịtị Numancia. Ebe ọ bụ na mgbe ahụ, ọ na-ejigide ụfọdụ ike, dị ka e gosiri Arab, ochie na nke oge a ncheta. Mana ọ na-enyekwa gị ọmarịcha osimiri na okpomọkụ nke okpomọkụ Valencian mara mma. Na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-egosi gị ihe ị ga-eme na Sagunto.
1 Kedu ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme na Sagunto?
1.1 Osimiri Sagunto
1.2 Obodo ochie nke obodo Sagunto
1.3 Castle nke Sagunto
1.4 Theaterlọ ihe nkiri roman
1.5 Ime ụlọ na obí eze
1.7 Ihe ncheta ndị ọzọ
1.8 Ụlọ ọrụ El Sagunto
1.9 Ọdịdị nke Sagunto
1.10 A obere nke gastronomy
Kedu ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme na Sagunto?
Kpọmkwem, anyị ga-amalite njem anyị nke obodo a Obodo Valencian n'akụkụ osimiri ya, mgbe ahụ, anyị ga-abịaru nso n'obodo ahụ iji gaa leta ihe ncheta ya. N'ihi na etiti akụkọ ihe mere eme nke Sagunto dị ihe dị ka kilomita ise site n'ụsọ oké osimiri na, ya mere, site na ebe ájá na ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa.
La Almardá Beach
Na Valencian obodo ị nwere ike ịnụ ụtọ atọ isi osimiri. Naanị otu bụ nke ahụ Port nke Sagunto, nke na-eje ozi dị ka nchebe. N'ihi nke a, ọ bụ ebe ájá nwere mmiri dị jụụ nke nwere ọrụ niile.
Ọbụna mara mma karịa bụ osimiri Almardá, onye isi ihe na-adọrọ mmasị ya bụ na eriri nke dunes nke gbara ya gburugburu na nke nwere uru dị elu nke gburugburu ebe obibi. N'ikpeazụ, ị nwere Corinto-Malvarrosa osimiri, nke ejirikwa ájá mee ya, ọ bụ ezie na e nwere nkume dị n'ụsọ oké osimiri. Ogo mmiri ya emeela ka e nye ya baajị ọkọlọtọ Blue ọtụtụ ugboro. Ọ bụkwa ya kacha nọrọ jụụ n'ime mmadụ atọ ahụ.
Ozugbo anyị nwere ịsa ahụ n'akụkụ osimiri, anyị ga-elekwasị anya n'ihe ị ga-eme na Sagunto, ya bụ, na ihe ncheta nke obodo Valencian nke akụkọ ihe mere eme na-enye gị.
Obodo ochie nke obodo Sagunto
Portalet nke Abụ
Ruru eru dị ka Akụ nke Mmasị OmenalaỌ bụ ọtụtụ okporo ụzọ dị n'etiti yana Plaza Mayor. N'ime obere oghere, ị nwere ike ịga leta ọtụtụ ihe ncheta. Banyere okpukpe, pụta ìhè na chọọchị Santa Maria, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX n'otu ụlọ alakụba ochie. Ọ bụ ezie na arụchabeghị ihe owuwu ahụ ruo narị afọ nke XNUMX, ọ na-anabata ụdị Gothic a tụrụ aka na Valencia. Tụkwasị na nke ahụ, n'elu steepụ nke si n'ebe ugwu na-abanye, ị nwere ike ịhụ ihe odide Latin abụọ.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na hermitages na ochie obodo dị ka nke Saint mary magdalene, na ọbara na Nne anyi di aso. Na, ntakịrị n'ihu, nke ụlọ ụka El Salvador, nke e wuru n'agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, ọ bụ ezie na ụdị Gothic oge ochie na-achị.
Otú ọ dị, otu n'ime ihe ịchọ mma nke akụkụ Sagunto a bụ Ahịa, nke a na-enweta site na mgbachi ọkara okirikiri mara dị ka Portalet nke Abụ. N'ime ya, ị ga-ahụ ka ebe a na-eme ochie nke obodo ahụ si dị, na mgbakwunye na ịga na ebe ịsa ahụ nke a na-akpọ. nke ọma.
N'aka nke ọzọ, na etiti akụkọ ihe mere eme nke Sagunto ị nwere ụlọ ndị mara mma dị ka nke ya Ụlọ Nzukọ Alaeze, ihe owuwu neoclassical nke narị afọ nke XNUMX, ma ọ bụ nke Ụlọ nke Mestre Penya, Gothic n'ụdị na isi ụlọ ọrụ ugbu a nke Historical Museum nke obodo. N'ikpeazụ, dị ka n'obodo ahụ dum, ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke ihe owuwu ndị Rom, dịka ọmụmaatụ, foduru nke mgbidi ahụ. Templelọ Diana.
Castle nke Sagunto
Ọ dị n'elu otu ugwu nke na-echebe obodo ahụ Ncheta Mba ebe ọ bụ na 1931. Ọ bụ ezie na ụdị ya ugbu a dị ugbu a karịa, a kwenyere na ọ dịlarị n'oge Iberia. Mgbe ahụ, ma ndị Rom ma ndị Goth, ndị Alakụba na ndị Kraịst enyewo aka na mgbanwe ha.
E kewara ya n'ime ogige asaa nwere mgbidi, nke Plaza de Armas pụtara, dabara na nnọkọ ndị Rom ochie. N'ihi na ya akụkụ, na Plaza de San Fernando, ị pụrụ ịhụ Epigraphic Antiquarium, ihe atụ nke ihe odide Iberian, Roman na Hibru.
Theaterlọ ihe nkiri roman
Ụlọ ihe nkiri Rom nke Sagunto
Ọ bụ ihe ịtụnanya ọzọ ị nwere ike ịga na Sagunto na ọ dị nso na nke gara aga. A rụzigharịrị ya nke ukwuu na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, ma nke a adịghị ebelata uru ọ bara. Ewubere ya site na narị afọ nke XNUMX mgbe Kraịst nwụsịrị, a rụrụ ya site n'iji ọchịchọ nke ugwu dozie ihe ndọtị.
Ọ bụ ihe atụ zuru oke nke nkwekọrịta ụkpụrụ ụlọ Rom nke oge ahụ, nke dabeere na ụkpụrụ nke Vitruvian. N'ihi ya, ndị egwú 22-mita nwere isi ihe atụ nke e wuru ihe ọ bụla ọzọ gburugburu. N'aka nke ọzọ, n'ọrụ gwupụta ihe nke ihe nkiri ahụ, a chọtara ọtụtụ ihe ndị sitere n'otu oge ahụ, dị ka ceramik, nkume ili ma ọ bụ stelae.
Ụlọ ihe nkiri ahụ abụghị naanị ihe ncheta dị mkpa nke Roman Sagunto. The foduru nke circo, nke e wuru na narị afọ nke abụọ mgbe Kraịst gasịrị na nke nwere ikike maka ihe karịrị puku mmadụ iri na ise. N'otu aka ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ n'ógbè ahụ ihe ha bụ domus dị ka Ụlọ dels Peixos, ihe ncheta olili ozu na okporo ụzọ ndị sitere n'oge ndị Rom.
Ime ụlọ na obí eze
Ime ụlọ nke Casa dels Berenguer
Sagunto enweghị ihe fọdụrụ nke oge ochie na Renaissance gara aga. Dịka ọmụmaatụ, ochie rampi e debewo ha n'otu akụkụ na ụfọdụ ụlọ elu ya. Ma ị nwekwara ike ịhụ obí ndị dị ka Ụlọ dels Berenguer, Gothic n'ụdị na nke ụlọ ndị ọbịa nnabata na nkọwa nke obodo na Delme Palace ma ọ bụ site na Punyalet, nke dị na gburugburu 1250 na nke naanị facade na-echekwa.
Ebe nchekwa nke Grau Vell
A maara mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri ochie nke Sagunto site na aha a, ebe ị nwekwara ike ịga na ebe ndị nwere mmasị dị ukwuu. Ọ bụ ikpe nke ebe ihe ochie, bụ́ ebe a chọtara ụlọ na ụlọ ndị dị ka ụgbọ okporo ígwè na ọkụ ọkụ, ha nile sitere n’oge ndị Rom.
Na kwa nke agbachitere otu nke Grau Vell, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX ma mejupụtara ụlọ elu, ụlọ elu square, ụlọ nkwakọba ihe na batrị. Obi abụọ adịghị ya, nzube ya bụ ịgbachitere ụsọ oké osimiri pụọ na mwakpo ndị ohi ma ọ bụ ndị agha ndị iro nwere ike ime.
Ihe ncheta ndị ọzọ
Ulo ugbo ewusiri ike nke Agua Fresca
N'otu aka ahụ, na mpụga Sagunto ị nwere ihe ncheta ndị ọzọ nke mmasị. Anyị ga-ekwu maka ya Ụlọ ọrụ ugbo siri ike nke Agua Fresca, nke e wuru n’agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Ọ bụ obere nnukwu ụlọ echere maka ụlọ ndị nwe obodo nwere ala ugbo. Ihe atụ ọzọ nke ụdị ihe owuwu a, ọ bụ ezie na ọ dị umeala n'obi karị, bụ ụlọ ọrụ ugbo des Frares, ya na ụlọ ọrụ ugbo ya na narị afọ nke XNUMX.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ Torre Gausa igwe ihe igwe siri ike, na Ụlọ elu San Roque na ụlọ nga, ha nile kwuputara Akụrụngwa nke Mmasị Ọdịbendị. N'ikpeazụ, ndị ebe obibi ndị nọn Santa Ana, nke e wuru na narị afọ nke iri na anọ ma nwee ụlọ ụka, ụlọ ebe obibi ndị nọn na ubi mkpụrụ osisi.
Ụlọ ọrụ El Sagunto
Ụka nke anyị nwanyị nke Begoña
Njem nlegharị anya nke ụlọ ọrụ, nke ghọtara dị ka nke na-eleta ihe nketa ochie nke mmepụta ihe nke obodo, enwetawo nkwalite siri ike n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Na, n'echiche a, Sagunto nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye gị.
Na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri nke oge a nke obodo ahụ, ị ​​​​ga-ahụ ọtụtụ ụlọ nke ga-enye gị ohere ịmegharị ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'oge gara aga. N'ime ha, ndị ochie ụlọ ọgwụ maka ndị ọrụnke ogbako izugbe ma ọ bụ ụgbọ mmiri mapụtara.
Ma dịkwa oké ọnụ ahịa ụka nke Our Lady of Begoña, commissary, cha cha ntụrụndụ ma ọ bụ ụlọ ndị ọrụ. Otú ọ dị, ma eleghị anya, ihe kacha adọrọ mmasị nke ihe nketa ụlọ ọrụ a bụ ọkụ ọkụ nke echekwara dị ka ihe ndabere nke ọganihu gara aga ma tinye ya na 1922.
Ọdịdị nke Sagunto
Marsh nke Moors
Ọ bụghị ihe niile bụ ihe ncheta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nketa na obodo nke Valencia (ebe a anyị na-ahapụ gị otu isiokwu banyere ihe ị ga-ahụ na obodo Valencia). Anyị agwala gị gbasara osimiri ya. Ma, na mgbakwunye, obodo ahụ dị n'etiti ogige ntụrụndụ eke nke Sierra Calderona na Sierra de Espadan. N'ihi nke a, ọ nwere ọmarịcha njem nlegharị anya na ụzọ njem Nordic.
N'etiti ndị mbụ, ndị a na-akpọ ogologo ụzọ GR-10, nke akụkụ nke obodo Puzol ọ gafekwara nke mbụ n’ime ugwu ndị ahụ anyị gwara gị. Ọzọkwa, n'akụkụ Sagunto ị nwere ala mmiri abụọ nwere oke uru gburugburu ebe obibi. Ọ gbasara ndị nke Almardà na Los Moros.
Ị nwekwara ike iku ume ọhụrụ n'ime eke saịtị Romeu, ebe oke ohia kachasi n'ime obodo di. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịhụ saịtị ihe ochie dị ka ndị Foto dị na Corbs na nke nke Covaxa.
A obere nke gastronomy
Pastisset nduku dị ụtọ
Iji mechaa njem anyị nke ihe ị ga-eme na Sagunto, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ n'ime efere ya. Otu n'ime ha bụ osikapa na cod, nke a na-akwado karịsịa n'ime izu ụka Lent na Nsọ.
Ma, ikekwe ndị kasị ahụkarị nke obodo bụ ibe, ụfọdụ obere Sanwichi nwere nnukwu omelet agwa na galik dị nro ma ọ bụ n'úkwù nwere tomato. Ọbụna tọrọ ụtọ bụ ximos ma ọ bụ achịcha mmiri ara ehi e ghere eghe nke jupụtara na tuna, tomato, akwa na ose akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
N'ikpeazụ, mgbe ọ na-abịa ụtọ, ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-agbalị na Sagunto. Ọmụmaatụ, Achịcha San Blas, na Coca De llandanke Pastisset nduku dị ụtọ ma ọ bụ Anis donuts.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ọtụtụ ihe ihe ị ga-eme na Sagunto. Dị ka ị hụworo, o nwere ihe ncheta ndị mara mma, gburugburu ebe obibi mara mma, na nri dị ụtọ. Echefula ileta obodo a mara mma Obodo Valencian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ebe nkiri Sagunto